यलक्स बचाउन सहयोगकाे याचना - Samadhan News
यलक्स बचाउन सहयोगकाे याचना
समाधान संवाददाता २०७६ साउन २२ गते १२:३८
५ महिनाका बालक यलक्स नेपालीलाई हाइड्रोसेफालिस (टाउकोमा पानी जम्ने ) को समस्या भएपछि परिवारजनले बच्चाकोे उपचार गर्न आर्थिक सहयोगको अपिल गरेका छन् । नेपालीले आफूले कमाएको पैसा बच्चाको उपचारका क्रममा खर्च भइसकेको भन्दै छोरालाई बचाउन सहयोगको याचना गरेकी हुन् ।
धिताल ६ कास्कीकी यमकली नेपाली पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा छोराको उपचार गराइरहेकी छन् । बच्चाको छिटोभन्दा छिटो अप्ररेसन गर्नुपर्ने र अप्ररेसनका लागि धेरै नै खर्च लाग्ने डाक्टरले भनेको यमकलीले बताइन् ।
बच्चको उपचारका क्रममा अहिलेसम्म ४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनको भनाइ थियो । ३ महिना अगाडि वीर अस्पतालमा उपचार गर्ने क्रममा बालकलाई हाइड्रोसेफालिस भएको पत्ता लागेको थियो ।
ज्याला मजदुरी गरी परिवार पाल्दै आएका बालकका बुबा सूर्य नेपालीले छोराको उपचारमा भौतारिरहँदा मजदुरी गर्नसमेत नपाएछि छाक टार्नै समस्या हुन थालेको छ ।
बालकको उपचारका लागि सहयोग गर्न चाहने संघ, संस्था वा व्यक्तिले हेमजास्थित गौरीशंकर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत खाता नं. ००१०९००३८९३ मा रकम जम्मा गर्न सकिने यमकलीले बताइन् । यमकलीलाई मोबाइल नं. ९८२७१२०४६६मा सम्पर्क गरी सहयोग गर्न सकिनेछ ।